SHEEKO JACAYL AH: Shandaranley – Naxdintii Cudbi Ee Markii Ay Aragtay Jacaylkeedii Balayax - Q:6aad - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaSHEEKO JACAYL AH: Shandaranley – Naxdintii Cudbi Ee Markii Ay Aragtay Jacaylkeedii Balayax – Q:6aad
Balayax, kama hadhin ee qunyar buu daba dhukusayey jaaniskii uu quud darraynayeyna waxa dhiciseeyey labaddaa wiil ee hablaha ku soo biiray. Wuxuu dabo bidhaansadoba goor maqrib ah ayaa la dulyimi aqaladii awrtu ka dareertay, gel-gelin aqalada ka yar durugsan ayey hablihii awrtii ku dabreen. Dabadeedna afartii dhalinyarada ahaa, ayaa labo labo isugu
qoorlaabay, oo haasaawaha falkiyey, iyada oo ay lababa geed yar dugsigii istaagtay. Balayax, wuxuu u soo dhowaaday Cudbi iyo wiilkii la taagnaa shaaca oo madoobaaday awgii ayaa u saamaxay inaan Balayax muuqiisa la arag, isaga oo aad ugu dhow meesha ay labada qof taagan yihiin. Goortii ay cabbaar wada joogeen ayey Cudbi iyo wiilkii la taagnaa is macsalaameeyeen, oo midba gees u dhaqaaqay. Cudbi, waxay u dhaqaaqday dhinicii aqalkooda oo qiyaastii u jiray ilaa boqol talaabo, balse inyar markii ay socod talaabo qaboobe ah, sii laafyootay ayaa Balayax oo sidii qof wax gaadaya cidhbaha ku soconaya, sanqadh tirasho awgeed, wuxuu soo gaadhay Cudbi oo qunyar iska talaabsanaysa.
Dabadeedna intuu garabka bidix u shiisii ka taabsiiyey ayuu isaga oo hoos u xanshaashaqaya ku yidhi, “Naayaa Cudbi waa Balayaxe, maxaad sheegtay” Cudbi, intay bahal naxdin ah la faagatay oo yaabtay ayey tidhi, “Waar waa nabade, xilligan xagee Alle kaa keenay, maxaadse doonaysaa, ma baadi doon baad tahay, cajeb!!!”. Balayax, oo doonaya inuu fursaddaa yar aad uga faa’iidaysto ayaa intuu afka u soo dhoweeyey ku yidhi, “Naa mayee, baadi aan adiga ahayni igama maqnee, kaalay halkan ina yara jooji aynu iswaraysanee”. Cudbi intay dareen dhiilo leh, muujisay oo werwertay ayey tidhi, “waar heedhe, malaa waa lagu sitaaye, hadii lagu arko waa lagu dilayaaye, iminkana waa layna arkayaaye, bal anigaa kuu soo baxayee, geedkaa hoostiisa ku sii dhuumo oo yaan lagu arkin”. Balayax, wuu aqbalay. Markii ay dhaqaaqdayna wuxuu ka sii dabo tuuray “soo dhakhso, soo dhakhso”. Cudbi, iyada oo fajacsan oo dhabbanada haysa ayey gurigii tagtey, ka dibna intay dhabbanka iyo gacanta isa saartay ayey fekertay, waxayna maskaxdeedu cabirtay, halista uu Balayax ku suganyahay iyo ballantiii ka dhexaysay, wadneheeda ayaa aad u shaqeeyey, oo si xawli ah ayaa dhiigeedu jidhka ugu wareegay.
Balse go’aankii ay gaadhi lahayd ayey jaanis u wayday, waayo hooyadeed dhool oo xerada adhiga ku jirta ayaa aragtay, iyada oo isla maqan ka dibna intay cod-dheer ku soo jeedisay ayey ku tidhi “naa maxaad la dheygagsan tahay, maad maqashan mareegta nagaga xidh-xidhid”. Cudbi oo aad moodo qof laydh qabsaday, ayaa intay booday oo aqalkoodii oo madow gashay, dabkii Afuuftay, markii uu dabkii ololeyna intay dhiilyar oo shan koonbo qaad ah soo qaadatay ayey caano Maydhanaan geel ah, ka buuxisay, ka dibna intay dadkii iska eegtay ayey muska dambe ee aqalka ku xasaysay. Dababdeedna waxay bilowday maqal xidhxidhid, ido lis iyo adhi kala gurid. Balayax, wuxuu halkii dhabac-naadaba waqtigii baa ku dheeraaday, siduu xagga guriga u soo eegayey ayey indhihii dheeraadeen.
Rafasho ayaa ka dhamaatay, siduu marba isu moodsiinayey mududuulka dhirta, ee uu isu lahaa waa tan ee hanqalka ula boodayey, hadana isu nabayey.
Balayax welwelka iyo welafka haya awgii, intii fiidadowga ahayd ee xoolaha la maalayey, way kaga badnayd sanadkii ay kala maqnaayeen. Kadaloob iyo kuudud xumo ayaa jidhkiisu la curqay. Hase yeeshee markii ay caweys dambe sugtii la marayso, sawaxankii iyo sanqadhii guriguna yara naaqusantay ayuu is yidhi “armeeshan ciddina kuugu imman maysee, maxaad yeeshaa, Alleylehe guriga ku dhowow”. Ka dibna intuu soo gurguurtay ayuu ku soo dhowaaday aqaladii. Reerku waa Afar Aqal oo waaweyn iyo Buul yar wuxuu iska gartay inuu buulka yari yahay buulkii Cudbi ka dibna isaga oo dhukusaya ayuu dhinicii buulka u dhowaaday. Markuu buulkii inyar u sii jiro ayaa gurguurashadiisii Adhyihii xerada ku jiray bahal didmo ah, rig ka siiyeen, oo musaska jiidheen. Dabadeedna inta jalaad iyo sawaxan la isla oogsaday ayaa dadkii aqalada ku jiray debedda u soo baxay oo la mooday in xoolihii bahal usoo dhacay. Cudbi aabeheed oo ardaa jiifay ayaa intuu fadhiistay oo kor u qayliyey yidhi “Naayaa Cudbi, waa maxay waxa adhyaha didiyey, ma dhurwaabaa, bal eeg”.
Cudbi oo iyadu fahamsan inaanu waxa Adhyaha didiyey ahayn, bahal ee uu yahay ninkii Balayax oo soo gurguuranaya markuu aagsaday ayaa tidhi “Aabe bahalna muu arag ee wuxuu ka didayaa karbaashkaa geedka saaran”.
Ka ibna Cudbi oo werwersan oo qalbiga kaleh “Ilaah baa xaal astura” ayaa iyada oo waalidka yool habaabinaysa, si loo moodo inay seexatay, buulkeedii gashay. Isla markaana waxay isu diyaarinaysaa sidii ay Balayax banaanka ugu bixi lahayd, balse intii aanay bixin, ayaa waxa u yimi laba hablood oo doonayey inay la caweeyaan, halkaas ayey Cudbi fursadeedii kaga dhabaqday.
Iyada oo ay Cudbi iyo gabdhihii u yimi buulkii dhex fadhiyaan, ayuu Balayax gurguurasho ku yimi buulka dhiniciisa, dabadeedna intuu fadhiistay meel ku beegan, halkii ay Cudbi fadhiday oo uu sida tuugta sanqadha iska ilaaliyey ayuu ushii uu sitay ka dhexdusiyey buulka docdiisa, wuxuuna dhabarka ka taabsiiyey Cudbi oo sii jeedda, si uu isu ogaysiiso inuu joogo, oo ay ugu soo baxdo.
Cudbi markii ay dhengedu dhabarka ka taabatay wax dhaqdhaqaaq ah, ma muujin dareen eegmona iskuma deyin waayo way iska garatay cidda usha taabsiisay. Dabadeed, si ay Balayaxna jawaab u siiso, caweyska hablahana u sii waddo oo ay isaga ilaaliso in la fahmo, waxay samaysay sheeko afjaaq ah, oo ay Balayax wax ugu sheegayso, ka dibna intay hablihii soo jeedisay oo hadalkii kor u qaaday ayey tidhi “Naa yaadheheen, caawa waan idiin sheekaynayaaye idhegaysta. Beribaa waxa la yidhi wiil iyo gabadh baa is jeclaa, waxayna ku ballameen inay is guursadaan, iyaga oo aan weli isguursan ayaa dagaalo dhaceen oo labadoodii beelood is dileen, dabadeedna colaaddii baa kala fogaysay. Markay sannad kala maqnaayeen, ayaa wiilkii soo raadiyey gabadhii, ka dibna wiilkii iyo gabadhii waxay goor fiid ah, isku arkeen meel gurigii gabadha reerkooda u dhow. Ka dibna gabadhii waxay wiilkii ku tidhi, waan kuu soo baxayaaye, geedkaa hoostiisa igu sii sug, dabadeedna wiilkii baa intuu sugi kari waayey, buulkii gabadha docdiisa soo fadhiistay, ka dibna gabadhii oo hablo la sheekaysanaysa ul dhabarka kaga gujiyey, markaasay gabadhii wiilkii ku tidhi “inan yahow ma hedi ku wadday, mise hunguri ku wad, mise hammo ku wadday. Haddii hedi ku waddo soo soco, raggaasi haku dilleene. Haddii hunguri ku wadana, mus dambeedka aqalka dhiisha caanaha ah, ee ku jirta orod oo kala bax. Hadii hammo ku waddona, halkii lagugula ballamay ku noqo waa laguu imanayaaye”. Balayax, markuu fahmay inay hawraartu, isaga u dhacayso, ayaa intuu dib u gurtay oo dhiishii caanaha ahayd, kala baxay muskii iskaga jebiyey gaajadii ba’nayd ee dhowrka godol ku qaadhsanayd, ka dibna wuxuu dib ugu noqday geedkii ay fiidadowgii ku ballameen. Xiliga hurdo dakharta la yidhaahdo, oo ah marka habeenka saddex meelood oo meeli tagto ayey Cudbi soo dustay, oo u tagtay Balayax oo dugsigii ay ku ballameen yuurura, halkii bayna isku waraysteen. Intii aanay gudo gelin sheekadii waayo waayo iyo arrimihii guurka ayey Cudbi hadal canaan iyo calaacal isugu jira u qadintay Balayax, waxayna tidhi “miyaad waallantahay, maxaad halista intaa leeg naftaada u soo marisay, miyaadan ogayn in hadii ay imika walaalahay iyo ilmaadeeraday, ku arkaan ay ku sadqaynayaan. Gacaliye, goormaad naftaada sidaa u nacday. Ta kale dhulkaad soo martay, waa dhulkii uu sida kashkaashka u jiifay Libaaxii dadyahanka ahaa, arladaa balaadhan ee aad soo martayna waa cidla ee sideebaad uga soo nabad baxday”. Balayax, intuu dhoolacaddeeyey ayuu yidhi, “Gacaliso, horta Libaaxaasi, tuu xalay ibadday kaagama sheekayn karo, waxaase igaga darnaa mas iga helay geed dushii. Khatarta aad sheegtayna, way ii muuqatay, laakiin waxaas oo dhan, waxbaa igaga waynaa. Waana adiga waayo muxubada aan qabo ayaa i shidaysay. Takale Soomaalidu, waxay ku maah-maahdaa bahalka axdiga layidhaahdaa nin garanaya waa ku eebo nin aan garanayna waa ku ilaaq. Sidaa wgeed ballantii inoo dhexaysay ayaa col dad iyo dugaagba ii kaday waxaana doonayaa inaad caawa I raacdo, oo aad fuliso ballantii inoo dhexaysay”.
Cudbi, waxay isku dayday inay Balayax ku qanciso jawaab aan raacid degdeg ah ahayn, waxayna tidhi, “Walaal horta, been kumaad sheegin inaynu ballan weyn lahayn, balse waxa ka soo soka maray arin aynaan markii hore tirada ku darsan oo waxa dhacday colaad. Sidaa awgeed habeenkaa caawa ah, adiguna gurigayaga ku badbaadi maysid, anigana guri aad leedihiin la igu gaafi maayo, ee talo iga hoo, ballan danbe aynu qaadanno oo aynu yarabax-naanino inuu waqtigu isbedelo, oo ay colaaddu qabowdo”. Balayax, kuma qancin hindisaha iyo talada ay Cudbi soo jeedisay, wuxuuna yidhi, “gabadh yahay intaas oo saymo ah, oo aan Alle i baddin, adiga awgaa ayaan isu soo badday, imikana labo hal kala dooro, in halkan la igu arko oo maydkayga la dhigo, oo ay weliba walaalahaa iyo aabahaa igu dhagaroobaan iyo inaad meesha iga raacdo, labadaa arimood, wax iiga dhaxaynayaa ma jiro”. Cudbi, intay cabaar yara aamustay ayey goroda hoos u laad-laadisay oo dhulka dul hogotay. Dareen qiiro leh, ayaa jidhkeeda maansheeyey, waxa qalbigeeda aad ugu duxay kalgacaylka Balayax, la hoos joogo. Jacayl hor leh, ayaa Cudbi ku habsaday, duruufta meesha taal iyo kalgacaylka Balayax, soo labo dibleeyey ayaa beerkeedu hayn waayey, ka dibna qalbigeeda ayaa aad u damqaday, oo jacayl oodihiisa wata ayaa dabarka ku soo goostay, mililico jacayl baa dareenkeeda saaqay, waxay is tidhi, kor u eeg Balayax, ka dibna lingaxa hoose ee indhaheeda Eebbe quruxda ugu deeqay, ayey ilmo buurbuurani ragax ka soo tidhi, labada dhabban ayey shalmadii ay sidatay ku hadoodishay, iyada oo ay indhaheeda ilmadu ka qubanayso. Cudbi dibnaha ayaa dubaaxiyey, ka dibna hadalkii ay odhan lahayd, ayey marba dib u callalisaa. Hase yeeshee, markii ay cabaar kala aamusnaayee, qalbigana iska waafaqeen ayey Cudbi tidhi, “Gacaliye, waxba kulama diidaniye, adigu tali”.
Qaybihii hore halkan ka akhriso:
Caruurta Iskuullada Ingiriiska dhigata oo is caddeeya si aan midabkooda loogu caayin
WARAYSI XIISO BADAN: “Waxaanu Ognahay In Dhibaatada U Dhaxaysa Somaliya Iyo Kenya Lasoo Ajari Karo. Waxaan Doonayaa Inaan Itoobiya Geeyo Halka Ugu Sarraysa”